Blogger a Haven for Black Hat SEO | Martech Zone
Ry namana tsara sy mpanolo-tsaina, Ron Brumbarger dia nandefa taratasy ho ahy androany maraina niaraka tamin'ny rohy manelingelina ny bilaogy iray tao amin'ny Blogger izay nipoitra tao amin'ny Google Alerts sasany ho an'ny teny fanalahidy manaraka azy. Tsy averiko eto intsony ireo teny lakile, satria tsy tiako ny mpitsidika ny miverina miverina na mitsidika ny bilaogy, saingy nanelingelina ny zavatra hita. Ity misy ampahan-dahatsoratra avy amin'ny bilaogy hitako fa mifamatotra aminy:
Ny URL sy ny anaran'ny bilaogy dia toa voahodidin'ny fomba hafa mba hahafahan'ny mpamorona manara-maso ny valiny. Tafiditra ao anatin'ireo lahatsoratra ireo ny atin'ny antoko fahatelo nofafazana teny fanalahidy matanjaka - toa manandrana ny hakitroky ny teny lakile. Ary koa, misy rohy miverina mankamin'ny bilaogy hafa izay manandrana teny fanalahidy hafa… mitohy hatrany ny lalana.
Ilay bilaogy resahina dia toa tsy nangalatra atiny afa-tsy ny fanandramana fitsapana sasany momba ny teny fikarohana sy fehezanteny manan-danja. Ny antony iray mampatahotra izany dia ny fitsapan'izy ireo angamba mba hahafahan'izy ireo manisa ny fomba hahazoana izany teny izany amin'ny motera fikarohana. Nampahafantariko an'i Ron ary nandefasako rohy ho azy Fomba fitaterana bilaogy Spam Blogger; antenaina fa hakatona eo noho eo izy ity ary koa ireo bilaogy hafa mifandraika aminy izay mampifandray azy ireo sy avy amin'izy ireo.
Tsy gaga aho fa misy spammers any izay mizaha toetra ireo fomba ireo. Gaga anefa aho fa eo am-bavoronan'i Google tokoa izany! Matt Cutts dia mangataka hevitra vitsivitsy momba ny zavatra tokony horesahin'i Google webspam tamin'ny 2009 - angamba ny laharan'izy ireo manokana no tokony hatao lohalaharana!
Misaotra nampahafantatra ahy sy nanoratra momba an'ity Ron ity! Ron dia filohan'ny Bitwise Solutions, orinasa voalohany eto Indianapolis izay manao asa mahatalanjona eo amin'ny sehatra nasionaly Microsoft Sharepoint fampandrosoana sy fampidirana.
Tags: mainty maintysatroka mainty seosatroka maintyblackhat seoBilaogeraGoogle +matt cuttsMicrosoft Sharepointron brumbarger
Zava-dehibe ve ny fitomboan'ny Twitter?
Jan 13, 2009 ao amin'ny 2: 32 AM
Raha nanome angon-drakitra Google ny herin'ny kabary ianao ary nilaza hoe "lazao amiko ny momba ny sidina mankany Chicago" dia mety ho tena akaiky ny zavatra holazainy. Raha tsy misy olona mijery eny an-tsorony dia tsy misy dikany ny angon-drakitra.
Hahazo ny lanjan'ny teny fanalahidy marina tsara izany. Hahazo ny isan'ny matoanteny/nouns/stop teny marina izy io. Mety hahazo anton-javatra maro hafa be pitsiny tsara izy io saingy tsy misy dikany mihitsy izany raha tsy miverimberina amin'ny teny.
Tsy mahagaga ahy koa ny mahita an'io, toa ny taona 2010 no mety ho taonan'ny tetika mahery setra izay nandraisan'ny spammers ny valim-pikarohana faobe amin'ny hamaroan'isa raha toa ka lasa draconiana i Google amin'ny filàna ny fitambaran'ny teny tonga lafatra alohan'ny hanomezana ny valin'ny pejy voalohany. .
Tiako ny mandre bebe kokoa momba ny fikarohanao Doug raha toa ka misy fivoarana bebe kokoa amin'ity.
Aug 5, 2009 amin'ny 4: 45 AM
Tsy toa spam ve ny fanehoan-kevitra roa farany???
Blah tiako ny blôginao, hiverina hijery azy aho sns….,
manana PR3 Backlink izy ireo izao hmmmm...
Eny ary tsy hametraka rohy aho lol ny tenako 🙂
5 Aogositra 2009 à 12:46
Tsy mametraka lanja be amin'ny Pagerank aho – Mifantoka bebe kokoa amin'ny filaharana tsara ho an'ny teny fanalahidy misarika fifamoivoizana be aho. Ity bilaogy ity dia manana laharana tsara amin'ny teny fototra an-jatony. Te hanana PR9 ve aho? Azo antoka! Tsy afaka manapa-kevitra aho anefa izany. Manana backlinks TONS aho ary tantara lehibe - tsy azoko antoka hoe nahoana no ambany ny PR-ko.
Misaotra RE: ny SPAM. Ao amin'ny IntenseDebate aho izao ary miezaka mitady ny fomba hahitana ireo fanehoan-kevitra tranainy ireo mba hanamarihana azy ireo ho spam!
5 Aogositra 2009 à 12:47
Misaotra RE: ny SPAM. Ao amin'ny IntenseDebate aho izao – tsy azoko antoka hoe ahoana no nahalany azy. Lasa izy ireo izao!